Heerichi ifatti tarsa’uu Bahr Dar irraa eegaleera. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHeerichi ifatti tarsa’uu Bahr Dar irraa eegaleera.
Heerichi ifatti tarsa’uu Bahr Dar irraa eegaleera.
Heerichi ifatti tarsa’uu Bahr Dar irraa eegaleera. Naannoon Amaaraa guyyaa har’aa ifatti heericha tarsaasuun dhimma alaabaa heericha irratti murtaahee waggoottan darbaniif hojiirra jiru jijjiiruuf murteesseera. Alaabaa lummuxxii deeffachuuf akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Sun ammoo sirna 1991tti awwaalame ture. Amma sirni sun qabatamatti awwaalaa ka’ee heera tarsaasee heera mataa isaa seeraan deebifachaa jira.
Wanta Naannoon Amaaraa godhe warri ‘Addis Ababee’s hordofuuf karaarra jira. Bakkoota lamaan kanatti hojiirra oollaan magaalaalee Oromiyaa fi kan naannoolee biroo keessattis olaantummaan kanuma isaanii taha. Hiriirotni mootummicha deeggaruuf bahaman kan gidduu kanaa hundumtuu alaabaan filatanii bahanis kanuma sirna durii tahuu namuu quba qaba. Miidiyaaleen mootummaas itti gammadanii akka of-qaba tokko malee garsiisanii gabaafaman ajajaman. Qondaalonni mootummaa sadarkaa itti aanaa MM osoo hin hafne ”waliin jirra” jechuun dhaadachuus dhageenyeerra. Warra silaa kana mormee mormisiisu dursanii guuranii hidhaatti naquunis akeekni isaa kanaafi.
Heerri kun kan TPLF jedhamee murna amma aangoo qabateen abaarameera. ‘Heerri TPLF isuma TPLF waliin awwaalamuu qaba’ kan jedhus dhaadannoo warra baraa ti. Dhugaan jiru garuu heerri sun kan qabsoo ummatoota cunqurfamoo booda injifannoo dhufeen (hanquu tahullee, hojiirra ooluu baatullee) tumamee dha. Obbo Leencoo Lataan yaadadhe. Heerri sun qabiyyee ittiin ragga’e san akka qabatee bahuuf warra gumaache keessaa Mallasitti aanee kan jiru Obbo Leencoo dha. Har’a garuu Obbo Leencooma duratti qaama isaan “mootummaan kun mootummaa Oromooti
” jedhanii falmaniifii fi duukaa dhaabbataniin heerichi yoo tarsa’u argaa jiru.
Dr marara Guddina
Qaamoleen nageenya Mootummaa sababa maatii Obbo Baqqalaa Garbaa taane qofaaf,